China indlela yokwahlula nokusebenzisa isinxibo sokwahlula kunye nempahla yokhuseleko yokhuseleko kunye neMveliso | Zhongmaohua
Uyakwazi ukwahlula kunye nokusebenzisa iimpahla ezizodwa kunye nempahla yokhuseleko yonyango
Nguwuphi umahluko nokusetyenziswa kweengubo zokwahlula yedwa kunye nempahla yokhuselo yezonyango ikakhulu yeyokuba iingubo zokhuselo zonyango zihlala ixesha elide kunesinxibo sodwa, ezikumgangatho okhuselayo kunye nokusebenza okungcono kokukhusela. Ukongeza ekuhlangabezaneni neemfuno zokunxiba zamandla aphezulu kunye nokuxhathisa okuphezulu, ezi zinto zihlala zahlukile ngenxa yeenjongo ezahlukeneyo zokukhusela kunye nemigaqo yokhuselo.
Indlela yokwahlula phakathi kwengubo yokuzihlukanisa yedwa kunye nempahla yokhuseleko yonyango
Nangona izambatho zokhuselo zonyango zibhetele kunesinxibo esisodwa, kodwa iindleko ziphezulu, ngenxa yemisebenzi eyahlukeneyo, ukhetho lwezambatho zokhuselo ziya kwahluka. Umahluko phakathi kweempawu zengubo yokhuselo lwezonyango kunye neengubo zodwa.
Iingubo zokhuselo zonyango
Umsebenzi okhuselekileyo wokunxiba kunye nokusetyenziswa
Impahla yokhuselo lwezonyango sisixhobo esikhuselayo sonyango esinxitywa ngabasebenzi bezonyango xa bedibana nezigulana ezineklasi A okanye iklasi A izifo ezosulelayo. Izigqoko zodwa zizixhobo ezikhuselayo ezisetyenziswa ngabezonyango ukunqanda ukosulelwa ligazi, ulwelo lomzimba kunye nezinye izinto ezisulelayo, okanye ukukhusela abaguli kusulelo.
Iimpawu ezahlukileyo zomsebenzisi
1. Xa unxibelelana nezigulana ezinesifo esosulelayo esidluliselwa ngunxibelelwano, ezinjengezigulana ezinezifo ezosulelayo, izigulana ezinosulelo oluninzi lwezifo ezingena gciwane, njl.
2. Ukukhuselwa okukhethekileyo kwezigulana, ezinjengokuxilongwa kunye nonyango lwezigulana ezinokutsha kakhulu kunye nezigulana ngokuhambisa ithambo.
3. Xa isiguli singasasazwa ligazi, ulwelo lomzimba, ukufihlakala kunye nokudumba.
4. Ukungena kumasebe aphambili afana ne-ICU, NICU, iiwadi ezikhuselayo, njl njl, nokuba azinxibi ngubo zodwa, kufuneka kusekwe injongo yabasebenzi bezonyango yokungena kunye nokunxibelelana nezigulana, kunye nemigaqo yangaphakathi eyoneleyo.
Nxiba impahla yokhuselo lwezonyango:
Xa bevezwa sisifo esosulelwe ngumoya kunye nesifo esosulelayo sisifo seengcongconi, banokuphalazwa ligazi lesigulana, ulwelo lomzimba, ukufihlakala, kunye nokugonywa.
Ukusetyenziswa okwahlukileyo kweengubo zokukhusela
Isinxibo esikhuselayo ngonyango kukuthintela abasebenzi bezonyango ekubeni bosuleleke. Yindlela eyodwa yokuzihlukanisa yedwa kwaye ijolise ikakhulu kubasebenzi bezonyango; kunye nokunxiba impahla eyedwa kukhusela abasebenzi bezonyango ekubeni bosulelwe okanye bosulelwe kwaye kuthintelwe abaguli ukuba bosulelwe.
Izibonelelo zokunxiba okhuselayo kwezonyango ngaphezulu kwengubo ekhethekileyo
1. Ingubo yokhuselo lwezonyango ikwayinxalenye ebalulekileyo yezixhobo zokhuselo lwezonyango. Isidingo sayo esisisiseko kukuvimba izinto ezinobungozi ezinjengeentsholongwane kunye neebacteria, ukukhusela abasebenzi bezonyango kusulelo ngexesha lokuxilonga kunye nokunyamekela.
2. Impahla ekhuselayo yonyango kufuneka ihambelane neemfuno zomsebenzi oqhelekileyo wokusetyenziswa, kunye nokunxiba okungcono okuthuthuzelayo kunye nokhuseleko, njengokufumana okungcono kokunyibilikiswa, ukusebenza ngokuvutha komlilo kunye nokuchasana notywala.
3. Isinxibo esikhuselayo sonyango sineempawu zomsebenzi ochasayo wokuphefumla, ukuphefumla okuhle, amandla aphezulu kunye nokuxhathisa okuphezulu koxinzelelo lwehydrostatic. Isetyenziselwa ikakhulu kwiindawo zokwenza amashishini, ezombane, ezonyango, amachiza kunye neentsholongwane.
Enye inqaku nayo yahlukile. Abo babonelela izibhedlele ngokwesicelo sikarhulumente bafuna "imvume yobhaliso lwezonyango", ngoko ke zonke iimpahla zoncedo zokhuselo kufuneka zingqinisiswe, kunye nempahla yokunxiba isetyenziswa ngokubanzi kwimfuyo, elebhu, njl. Njl. Wonke umntu kufuneka athobele ingqalelo. isatifikethi sinokwenza ulingo lokwenza iimpahla zokuzahlula abanye kwaye abanakho ukubanikezela esibhedlele.
Ixesha lokuposa: Meyi-07-2020